Thomas Tuchel Oo Ka Hadlay Guushii Kooxdiisu Xalay Ka Gaadhay Kooxda Borussia Dortmund Kuwaasi Oo Laga Reebay Tartanka Champions League. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Thomas Tuchel Oo Ka Hadlay Guushii Kooxdiisu Xalay Ka Gaadhay Kooxda Borussia Dortmund Kuwaasi Oo Laga Reebay Tartanka Champions League.
Tababaraha Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ayaa ka hadlay guushii kooxdiisu ay ka gaartay Borussia Dortmund iyadoo kooxda Ligue 1 ka dhisan ay gaadhay markii ugu horeysay muddo afar sano ah Champions League.
Ma ahan ilaa sanadkii 2016 kooxda PSG oo u soo gudubtay wareega 8da laakiin kooxda heysata horyaalka Faransiiska ayaa soo gabagabeysay wareega 16ka ka dib markii ay 2-0 ku dubteen kooxda Dortmund kulan albaabada u xidhnaa xilli ay cabsi ka jirtay Paris.
Neymar iyo Juan Bernat ayaa qeybtii hore ee ciyaarta dhalisay iyadoo PSG ay 2-1 kaga soo adkaatay lugta hore ee Parc des Princes, halkaasi oo Dortmund ay ku dhameysatay 10 nin ka dib casaankii xilli dambe ee Emre Can.
Intaa ka dib Tuchel wuxuu wariyeyaasha u sheegay “Runtii waxay la yaab ku aheyd baska [ciyaartii ka horeysay Waxay ahayd mid xoogan Waxay na siisay jawi baaska, kalsooni badan, farxad aad u badan.
“Kadib, kooxdu waxay bilaabeen hees, waan wada heesaan, daaqadaha waxaan ku dhufanay, way fiicneyd in jawiga la helo ciyaarta kahor. Xaqiiqdii waxay aheyd jawigii aan ugu baahneyn ka hor ciyaar weyn, cadaadis badan.
“Farxaddan, habkan oo loo wada heeso … Waxaan dareemay faan aad u wanaagsan, waxaanan rajeynayay inaan keeno weerkan, ruuxan garoonka dhexdiisa, kooxduna sidaasay yeelaysay. Aad ayaan u faraxsanahay.”
“Goolkii koowaad kadib, waxaan xakameynay ciyaarta,” Tuchel ayaa sii waday. Marka la fiiriyo kii hore aad ayuu u fiicnaa. Goolka kadib waxaan si fudud u luminay kubadaha qaar. Waxaan lumineynay kubad heysashada. Laakiin waxaan dhahnay gool labaad. Waxaa jiray daqiiqado, waxaa jiray daqiiqado halka aan ku dhibnay. Laakiin waan dhibnay marwalba koox ahaan.
Tusaale ahaan labadayada weeraryahan, Edinson [Cavani], Pablo [Sarabia], ka dibna Ney [Neymar], Kylian [Mbappe], waxay sameeyaan difaacyo aad u badan orod, sida xamaasadaha qaar! Waxay xireen meelo qaar. dareenka ah inaan marwalba wada joogno, ka dib, waxaan halis galnay goos goosyada markii aan weeraraynay, waxay aheyd ciyaar super, super ciriir adag Ma aanan helin caawinaada taageerayaasha. Taasi waa mid aad u dhib badan laakiin waxaan sameynay, laakiin hadda aad ayaan u faraxsanahay. ”
Tuchel ayaa intaa raaciyay: “Waxaa jira waxyaabo ka muhiimsan kubada cagta, waan ognahay taas. Laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyay ma dooneynin inaan guul darreyno, taasi waa gabi ahaanba cadahay Waan necbahay luminta.
“Way adkeyd ka dib Dortmund halkaasi wax walba way cadahay. “
Wararkii Ugu Danbeeyey Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Qaarada Yurub.
Ciyaartoy Cabdi Shariif Oo Heshiis Cusub u Saxiixay Kooxda Liverpool?
Shaxdan Ay Soo Saartay Shabakada Whoscored Ayaa Noqotay Shaxda Mustaqbalka?